History – MMANIME
Asura Genres – Drama, Historical Duration – 1 hr. 15 min. Rating – R+ – Mild Nudity Subtitle – Myanmar Subtitle Translated By – Izuna / Meaning checked By -Yamin / Encoded By – Hiro REVIEW – [Zawgyi]_၁၅ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဟာ ငတ်မွတ်မှု ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ထွန်းတော့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။1459နဲ့1461 ခုနှစ်ကြားမှာလည်း လူပေါင်း၈သောင်းကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီ့ခေတ်မှာပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဆာလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေပြည့်နေတဲ့မိန်းမကြီးကမွေးဖွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလေးကို သူမဟာ ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆာလောင်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကလေးကို စားဖို့ကြိုးစားစဉ် ကောင်းကင်မှလာသော မိုးကြိုနှင့်အတူ တည်းခိုရာ ဇရက်မှာ မီးလောင်ပြီး မိန်းမဟာ ကလေးကိုစွန့်ပစ်ကာ အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့လေတယိ။ ၈နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်လေးဟာပုဆိန်တစ်လက်နဲ့အမဲလိုက်ဖြတ်နေခဲ့တယ်။ သူဟာလူတွေကိုသတ်ပြီးလည်းစားခဲ့တယ်။ သူဟာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အသာလေးပဲခုခံခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကနေစရာနဲ့စားစရာတွေပေးပြီးကောင်လေးကိုAsuraလို့နာမည်မှည့်ခဲ့တယ်။ ကောင်လေးတစ်နေ့နားလည်မှာပါဆိုပြီးဘုန်းကြီးကဓမ္မစာပေတွေကိုလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်… ကောင်လေး Asura ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာပြီး ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့….အားလုံးပဲ video ...